म थारुको मात्रै उम्मेदवार होइन, सम्पूर्ण घोराहीबासीको हितमा काम गर्नेछु
आइतबार, ११ आषाढ, २०७४
दाङ जिल्लाको सदरमुकाम घोराही उपमहानगरपालिकाको मेयर पदका लागि नेकपा एमालेले यस पटक अनुभवले खारिएका किसान नेता नरुलाल चौधरीलाई अगाडि सारेको छ । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत यही असार १४ गते हुन लागि रहेको निर्वाचनमा एमालेले राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र समाजका अन्य धेरै पाटाहरुमा लामो अनुभव संगालेका चौधरीलाई मेयर पदका लागि उमेदवार बनाएको हो ।
चौधरी समुदायको किसान परिवारमा जन्मिएर राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा नेतृत्वदायी तहमा बसेर चौधरीले असंख्य कामहरु गरेका छन् । २०२४ साल वैशाख ३ गते घोराही–२ रामपुरमा बुबा विलरा र आमा मन्धरी चौधरीको कोखमा कान्छा छोराकारुपमा जन्मेका चौधरीका ६ जना दिदी बहिनीहरु छन् । मास्टर तहसम्म अध्ययन गरेका चौधरी नेकपा एमालेको वडा, गाउँ, क्षेत्रका विभिन्न पदहरुमा रहेर काम गरेको अनुभव रहेको छ । चौधरी एमाले दाङको जिल्ला अध्यक्षमा समेत निर्वाचित भएका थिए ।
यसका साथै एमालेकै तर्फबाट २०५४ सालमा रामपुर गाविसको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका गाउँठाउँको विकासका लागि अनगिन्ति कामहरु गरेका चौधरीको नेतृत्वमा रामपुरका विकट ठाउँहरुमा समेत दर्जनौ स्कूल, खानपानी, सिचाई, अस्पतालहरु निर्माण भएका छन् । रामपुरलाई कृषिको पकेट क्षेत्र घोषणा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएका चौधरीले बाटोघाटो निर्माणमा पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । प्रस्तुत छ चौधरीसंग पत्रकार प्रेम रम्जाले गरेको कुराकानीः
तपाईको उम्मेदवारी घोराही उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा किन ?
घोराहीको विकासका लागि मैले घोराही उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएको छु । मैले घोराहीको समृद्धि, घोराहीको विकासका लागि विगतदेखि काम गर्दै आएको छु । यसको मूल्यांकन यही स्थानीय तहको निर्वाचनबाट हुन्छ ।
अहिले देशभरी नेकपा एमालेप्रति चलेको जनलहरलाई ध्यानमा राख्दै घोराही उपमहानगरपालिकाको समृद्धिका लागि घोषणा पत्र जारी गरेका छौँ । सबै मतदातासम्म हाम्रो घोषणा पत्र पुगेको छु । हाम्रो घोषणा पत्र घोषणका लागि घोषणा गरिएको होइन । काम गर्नका लागि तयार पारिएको हो । जनताले विश्वास गर्छन् र त्यही घोषणा पत्रका आधारमा मैले र मेरो पार्टीले काम गर्नेछौँ ।
घोराहीको विकासका लागि तपाईका एजेण्डा के हुन् ?
घोराही सम्भावना बोकेको देशको उपमहानगरपालिका हो । यो उपमहानगरपालिकालाई समृद्ध बनाउनका लागि हामीसंग योजना रहेका छन् । विगतमा पनि एमालेका प्रतिनीधिहरुले धेरै राम्रा काम गरेका छन् । एमालेका प्रतिनिधिहरुले गरेका कामहरु घाम जत्तिकै उज्योलो भएर बसेका छन् ।
देशको नमुना शहर र विकासका दृष्टिले नमुना शहर, सुशासनयुक्त नगर, यसक्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका हाम्रो पहल पहिलो एजेण्डाका रुपमा रहेका छन् । घोराहीबासी विकासको योजना र सहज रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने ब्यक्तिको खोजीमा रहनुभएको छ । त्यही खोजीलाई हामी हामी पुरा गर्नेछौँ । हामीहरु मतदाताको घरदैलोमा पुग्दा सबैले सहानुभुति दिनुभएको छ ।
तपाईले यस्ता सबै काम गर्ने आधार के हुन् ?
मैले २० बर्षसम्म जनप्रतिनीधि नहँुदा धेरै समस्याहरु स्थानीयले भोगेका छन् । त्यो समस्यासँग मैले नजिकबाट बुझेको छु । जिल्ला विकास समिति, स्थानीय निकाय गाविस तथा नगरपालिकामा बोर्ड प्रतिनीधि भएर काम गरेको अनुभव मसंग छ । यस्तै २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचन मार्फत् रामपुर गाविसको अध्यक्ष भएर काम गरेको अनुभव छ ।
२०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट हामीले धेरै काम गरेका छौँ । यसले गर्दा म र हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका हामी सबैले काम गर्ने आधार यही दिन्छौँ । लामो समयसम्म जनप्रतिनीधि नभएको अवस्थामा कसैले पनि भुमिका खेल्न पाएनन् । सडक, विद्युत, खानेपानी, सबै कामहरु गर्ने हामीसंग प्रसस्त आधारहरु रहेका छन् । पछिल्लो समयमा राजनीतिक संयन्त्रमा बसेर गर्न लागिएका योजनाहरु पनि पूरा गर्नेछौँ ।
उपमहानगरपालिका विकट क्षेत्रका रुपमा रहेको छ काम कसरी गर्नुहुन्छ ?
पक्कै पनि घोराही उपमहानगरपालिका निर्माण गर्दा भूगोल ठूलो रहेको छ । देशकै ठुलो उपमहानगरपालिका पनि हो । प्राकृतिक रुपमा धनी उपमहानगरपालिका पनि हो । यस उपमहानगरपालिकामा पहाडीक्षेत्र सैघा, लक्ष्मीपुर, रामपुर, यस्तै दक्षिणतिर धर्ना, साविक त्रिपुर नगरपालिकाका विकट क्षेत्रलाई समेटिएको छ ।
समान ढंगले विकास गर्दै हामीले उपमहानगरपालिकामा रहेका १९ वटा वडामा समान विकास तथा यसभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गरिने छ । स्थानीयबासीको सुझावका आधारमा हामीले काम गर्नेछौँ । देशकै उत्कृष्ट उपमहानगरपालिका बनाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । यस्तै, विमानस्थल निर्माण, नियमित जहाज उडान, ब्यबस्थित खानेपानी, ब्यबस्थित औद्योगीक क्षेत्र निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य संघसस्थाको सहयोग तथा ब्यबस्थापन गर्ने प्रयास हामीले गर्नेछौँ ।
चुनावी प्रचार÷प्रसार कस्तो भइरहेको छ ?
असार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि हामीले घरदैलो, भेटघाट, काइकिङलगायतका कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । सबै वडाहरुमा हामी पुग्न सफल भएका छौँ । मतदाताहरुको आशिर्वाद लिएका छौँ । उहाँहरुले हामीलाई अवसर दिएमा मतदाताहरुलाई धोका दिने छैनौँ । हामी सधै जनताका बीचमा हुने प्रतिबद्धता जनाउन चाहान्छु ।
पार्टीभित्र मनमुटाव छ भन्छन् नि ?
हामी धेरै नेताहरु मेयरका पदको टिकटका लागि दौडमा थियौँ । मैले टिकट पाएपछि सबै नेताहरु एकै तवरले काम गरिरहेका छौँ । एकैसाथ प्रचारमा लागेका छौँ । आकांक्षी हुन स्वाभाविक हो । हामी नेताहरुका बीच केही मनमुटाव छैन । यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन यही भएर एक जुट भएर प्रचारमा लागेका छौँ ।
जातीयताका नारा लगायो भन्ने आरोप छ नि ?
हो, म थारुको समुदायको ब्यक्ति हो । यसमा लुकाउन पर्ने कुनै कारण छैन । तर, म थारु भएर निर्वाचनको मैदानमा छैन । म समग्र घोराही उपमहानगरपालिकाको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विगतदेखि चिन्तन गर्ने एक सचेत नागरिक हो । मलाई जातीयतामा लगेर जोड्नु दुखद कुरा हो । थारु हो यसमा मैले होइन भन्न मिल्दैन ।